Q & A – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်ခွံထိခိုက်ပြီး စုတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ မျက်ခွံအစားထိုးကုသမှု ပြုလုပ်လို့ရပါသလား ဆရာ။ A. လူနာက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မျက်ခွံထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး မျက်ခွံ (Eyelid) တစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်သွားတယ်။...
—၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ပခုံးအရွတ်ပြတ်တာ၊ ပြဲတာ (Rotator Cuff Disruption) ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို သိပါရစေဆရာ။ A. ပခုံးထိပ်ကြွက်သားတွေက လက်မောင်းထိပ်ရင်း ကြွက်သားတွေနဲ့ လာတွယ်နေတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဒီကြွက်သားတွေက...
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မအဘွားက အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ပြီးတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ မျက်စိကို ဘာတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါသေးသလဲ။ A. အတွင်းတိမ်အပါအ၀င် မျက်စိခွဲစိတ်ပြီးလို့ အချိန်တစ်လခွဲ- နှစ်လလောက်ပဲ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း...